Sarakiil Kenyan ah oo gaaray Kismayo |
Sarakiil Kenyan ah oo gaaray Kismayo
Wararka aynu ka heleyno Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ayaa ku soo warramaya in halkaasi ay gaareen Saraakiil Kenyan ah.
Saraakiishaan oo uu horboodaayay Taliyaha ugu sareeya Milatariga Ciidanka Kenya ayaa waxa ay kormeer ku tageen Xarumaha Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Kenya ay ku leeyihiin Gobollada Jubbooyinka oo ay ugu horeyso Kismaayo.
Meelaha ay booqdeen Saraakiishaan ayaa la sheegay in ay kula kulmeen Saraakiisha kale ee Ciidamada Kenya oo ay ka xog wareysteen xaaladaha Ciidamada iyo Howl galladooda ay ku xaqiijinayaan Nabad gelyada Gobollada Jubbooyinka.
Marka laga soot ago kulamadaasi ay la qaateen Ciidamada Kenya kaga sugan Soomaaliya Saraakiishaan Kenyanka ah ma jirto faah faahin intaa dhaafsiisan oo ku aadan waxyaabaha uu sida rasmiga ah ugu qotomo Imaanshahooda Jubbooyinka.
Kenya ayaa qeyb weyn ka ah Howl galka loogu Magac daray AMISOM iyadoo Ciidamadeeda ay ka soo qeyb qaateen dagaallo intooda badan ka dhacay Gobollada Jubbooyinka.